तपाईंको बालबालिकाको ओच्छ्यानमा पिसाब फेर्ने बानी छ ? यसरी हटाउन सकिन्छ - Horizon Khabar
तपाईंको बालबालिकाको ओच्छ्यानमा पिसाब फेर्ने बानी छ ? यसरी हटाउन सकिन्छ
काठमाडौ । प्राय साना बालबालिकाले राति निन्द्रामा ओच्छ्यानमा पिसाब फेर्ने गर्दछन् । कतिपय ठूलो उमेरका बालबालिकामा पनि यो समस्या हुने गरेको छ । यसले बालबालिकाका साथै परिवार र आफन्तलाई समेत अप्ठेरो बनाउँछ । साथै बालबालिकाको आत्मविश्वासलाई समेत कम गराउने र लजाउने जस्ता मनोबैज्ञानिक असर पनि पर्न सक्छ ।
बच्चाले सपनामा बाहिर पिसाब फेरेको देख्छ तर उसले बाहिर नभई ओच्छ्यानमै फेरेको हुन्छ । त्यसैले यस्तो समस्या आउन नदिन बच्चालाई रातमा उठाएर भएपनि पिसाब गराउने बानी बसाल्नु पर्दछ । यसो गरे बिस्तारै यो समस्या हराएर जान सक्छ । कतिपय अवस्थामा बालबालिकालाई राम्रोसंग सम्झाउन सकेपनि यो समस्या आफै हल हुन्छ ।
बालबालिकामा पिसाबको समस्या संक्रमणका विभिन्न कारणले हुन सक्छ । सामान्यतया बालिकाको तुलनामा बालकमा पिसाबको संक्रमण कम हुन्छ । तर, बालकमा पिसाबको संक्रमण देखियो भने त्यसले मिर्गौलामा समस्या निम्त्याएको हुन सक्छ ।
यस अलावा बालबालिकाको मृगौलाको बनावटमा फरक, पिसाब थैली, पिसाब नलीमा समस्या, पिसाब फेर्ने बाटोका छाला पूरा नफर्किंदा, कब्जियत तथा लामो समयसम्म पिसाब रोक्ने बानीका कारण संक्रमण देखिन्छ । यस्ता समस्या देखिए तुरुन्तै उपचारमा जानुपर्छ ।
Previous articleपहिलो डिजिटल मार्केटप्लेस नेपालमा सुरु
Next articleअफगानिस्तानमा ६.१ म्याग्निच्युटको शक्तिशाली भूकम्पले २५० जनाको मृत्यु
विश्व स्वास्थ्य सञ्जाल (डब्लिएचएन) द्वारा मंकीपक्सलाई महामारीको रूपमा घोषणा
डेङ्गुका कारण धादिङमा एक पुरुषको मृत्यु
आन्द्रासम्बन्धि अज्ञात रोगको प्रकोप, उत्तर कोरियामा सुरु भएको घोषणा
बेलायतले हङकङ चीनलाई हस्तान्तरण गरेको २५ औँ वार्षिकोत्सव मनाउन सी हङकङ भ्रमणमा असार ११, २०७९
लोकगायिका दिलमाया सुनार मृत भेटिइन्